Ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ na-enweghị ike ijikwa eziokwu | Martech Zone
Sunday, July 19, 2015 Fraịde, Ọktọba 9, 2015 Douglas Karr
Anọ m na-eme nnwale na nso nso a. Afọ ole na ole gara aga, ekpebiri m ịbụ 100% uzo banyere okwukwe nke m, nke mmụọ, na nke ndị ọzọ peeji nke Facebook m. Nke ahụ abụghị nnwale… nke ahụ bụ naanị m ịbụ m. Ihe m kwuru abụghị iji kpasuo ndị ọzọ iwe; ọ bụ naanị ịkọwapụta nke ọma. Ka emechara, nke ahụ bụ ihe ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-anọgide na-agwa anyị, nri? Ha na-ekwusi ike na soshal midia na-enye ohere a dị ịtụnanya ijikọ onwe gị ma dịrị uzo.
Ha na-agha ụgha.
Nnwale m malitere izu ole na ole gara aga. Akwụsịrị m biputere esemokwu ọ bụla na ibe Facebook m ma nọgidesie ike na-atụle isiokwu ndị ahụ mgbe ndị ọzọ webatara ya na ibe ha. Nke a bụ akụkọ, mana nnwale ahụ mere ka m ruo nkwubi okwu atọ:
A na m ewu ewu karị mgbe m kpuchie ọnụ ma debe echiche m. Nke ahụ ziri ezi, ndị mmadụ achọghị ịma m ma ọ bụ chọọ ka m nwee nghọta, ha chọrọ onye ahụ. Nke a gụnyere ndị enyi m, ezinụlọ m, ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ndị ọrụ ibe m… onye ọ bụla. Ha na ndị mụ na ha na-akpakọrịta karịa ka ha na-esekarị okwu. Ka a sịkwa ihe mere vidiyo pusi na-achịkwa Internetntanetị.
Imirikiti ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi enweghi nghọta ọ bụla n'ime ndụ onwe ha, nsogbu, nkwenye, na okwu esemokwu n'ịntanetị. Ekwetaghị m? Gaa ọkacha mmasị gị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi onwe Facebook page na anya n'ihi na ihe ọ bụla na-ese okwu. Anaghị m achọ ịwụli na bandwagons ọha - nke ha na - eme - a na m ekwu na ị ga - emegide ọnọdụ ahụ.
Imirikiti ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi eleda arụmụka nkwanye ùgwù anya. Oge ọzọ na ọkacha mmasị gị na-elekọta mmadụ media ọkachamara onye mere a okwu ma ọ bụ dere a akwụkwọ na nghọta jumps na bandwagon, na ị na-ekwenyeghị na ha… kwuo ya na ha Facebook peeji nke. Ha kpọrọ ya asị. Onweghi ihe na-erughi ugboro atọ ka onye ọrụ ibe m jụrụ m pụọ na peeji ha ma were uche m ebe ọzọ. Ndị ọzọ esoghị m gbaghara m mgbe ha chọpụtara na m nwere nkwenye ndị megidere okwukwe m.
Ekwela ka m mehie, m omiiko. Enwere m mmasị na nnukwu arụmụka ma anaghị m adọpụ m aka. Mgbasa mgbasa ozi na-adaberekarị n'otu akụkụ ebe m na-adaberekarị n'akụkụ nke ọzọ n'ọtụtụ isiokwu ndị na-ese okwu. Anaghị m ekwenye na ndị mmadụ naanị ka m ghara ikwenye - Naanị m na-anwa ịkwụwa aka ọtọ na nghọta banyere nkwenkwe m. Ana m eme ike m niile iji nọgide na-ekwu eziokwu ma bụrụ onye na - abụghị onye - agbanyeghị na anaghị m akparị gị.
Na-anụkarị n'ịntanetị na mgbasa ozi, anyị kwesịrị ikwurịta eziokwu. Bogus… ọtụtụ ndị achọghị ịkwụwa aka ọtọ, naanị ihe ha chọrọ bụ ka ị wụ na isi ha. Ha ga-amasị gị, kekọrịta mmelite gị, zụta n'aka gị mgbe ha chọpụtara na ị kwenyere na ha. Eziokwu banyere social media bụ:
Can't gaghị ejide eziokwu ahụ.
Enwetara m otu ọkà okwu isi okwu bịakwutere m na mmemme mba, nye m nkwado, ma gwa m na ọ hụrụ nguzo m na-etinye isi na ntanetị online ọ nweghị ike ikwu ya n'ihu ọha. Ọ nweghị mmasị ma ọ bụ kesara echiche ọ bụla ma ọ bụ edemede m kesara na ibe Facebook m n'agbanyeghị na ọ na-eso m. Achọghị m itinye okwu n'ọnụ ya, mana nke ahụ na-agwa m n'ụzọ doro anya na onye na-ede ihe n'ịntanetị bụ phony, jiri nlezianya kpụọ ya iji hụ na ọ na-ewu ewu ma ghara itinye ego ya n'ihe egwu.
N'ihi ya, m enweghị ike ịju ma na-eche. Kedu ihe ọzọ ndị a na-ekwu na ntanetị nke a na-eme ka ọ bụrụ ndị a ma ama, na ọ bụchaghị ịbụ eziokwu? Ka anyị na-etinye usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe anyị maka ndị ahịa anyị, anyị na-ahụkarị ihe bụ ewu ewu enwebeghị mmetụta dịka ihe bụ edgy.
Nke a bụ ụfọdụ nghọta na ịkwụwa aka ọtọ maka gị - ọtụtụ ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ mgbasa ozi bụ ndị ụgha na ha kwesịrị ịnakwere ya. Ha kwesiri itufu ndụmọdụ BS ha banyere nghọta ma gwa ụlọ ọrụ na, ọ bụrụ na ha chọrọ ịbawanye mbata na nnabata, ha kwesịrị izere esemokwu, wụkwasị na bandwagon ndị ama ama, rụọ ọrụ phony persona… ma lelee uru na-eto. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ - soro ndu ha ma gha ụgha.
Ka emechara… onye na-eche gbasara iguzosi ike n'ezi ihe na ịkwụwa aka ọtọ mgbe enwere ego.
Tags: ikwu eziokwueme ihe n'eziokwundị ụghaịgha ụghaelekọta mmadụ mediandị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịtandị ọkachamara na-elekọta mmadụeziokwu
Jul 19, 2015 na 1:31 PM
Maka ihe ọ bara uru, ahụrụ m nghọta gị n'anya n'ịntanetị. Ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ma ọ masịrị m iche na m ma gị nke ọma iji ghọta ọchịchọ gị maka arụmụka nkwanye ugwu. Ọ na-amasị m ndị na-eme ihe n'eziokwu na ntanetị. Aga m agba gị ume ka ị nọrọ onwe gị.
Jul 19, 2015 na 1:51 PM
Adịghị m ọkachamara na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-enwe mmasị itinye m na igbe ahụ. Naanị m chọrọ ịma, ị na-ahọpụta m dị ka onye na-enweghị ike ijigide eziokwu, na-enweghị mkparịta ụka ma na-ezere nghọta?
Jul 19, 2015 na 2:17 PM
Shel, dị nnọọ iche. 'Ve na-na na na-enwe a nkwanye ùgwù mmekọrịta site na anyị iche! Ọ bụ ya mere m ji asọpụrụ gị nke ukwuu!
Jul 19, 2015 na 4:31 PM
OK Doug, m ga-asị na ekwenyeghị m gị, dabere na ụdị ọnọdụ onye na-eguzo na-ewere ọnọdụ na njikọta njikọ aka a.
Ọ bụrụ na esemokwu ma ọ bụ nkwụnye otu na-eme bụ na mpaghara azụmahịa, nke echiche na ahịa, mgbasa ozi, wdg, na mmadụ anaghị ekwenye ma ọ bụ kwenye n'ihu ọha mgbe ọ na-arụrịta ụka, yabụ na ha abụghị ezigbo.
Ọ bụrụ na esemokwu ahụ bụ n'okpukpe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ụkpụrụ onwe onye abụghị na ọnọdụ azụmahịa, ma ha gbachi nkịtị, nke a apụtaghị na ha na-adị nkọ ma ọ bụ na-echekwa mmadụ ụgha. Ha nwere ike iche na m nwere na enwere oge na ebe a ga-eji na-atụle ihe dị iche.
Ajuju m bu, you bu ezigbo nkpasu iwe a ma obu na o na ese ihe sara mbara iji mee ka ndi n’agu buru ezigbo ya? Ana m agbalị ịbụ onye ezi uche dị na ya ma zere ikwufe okwu oke na ihe m na azịza ha, ha anaghịkwa arụ ọrụ dị ka mmụọ jupụtara na mmụọ, "enweghị skim na okwu mkparị". Ezigbo ihe abughi m onye na - elekọta mmadụ.
Jul 19, 2015 na 4:40 PM
Ọ dị mma ọgbaghara nke post, nyefere ya tupu m nwee ohere idezi ya… Dịka m kwuru, maa bụghị onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi (ọkachasị mgbe ọ bịara ịmata etu esi dezie ihe m na-eme na ekwentị m)
Echere m na ihe m kwuru doro anya, na njakịrị na mmetụta na-aza ma ọ bụghị mgbe niile kwesịrị ekwesị ma ọ bụ bụrụ eziokwu.
Jul 19, 2015 na 6:47 PM
Isi okwu m dị mfe… nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ na mgbasa ozi mmekọrịta anaghị eso ndụmọdụ ha. Nghọta na nkwukọrịta anaghị adị irè belụsọ ma ha emeghị ihe n'eziokwu. IMO, ọtụtụ ihe kpatara anyị ji enwe nsogbu na ntanetị bụ enweghị ike ndị mmadụ ikwu uche ha ma nwee ihe ikwu eziokwu, ma ọ bụ ekweghị ibe nọrọ nke ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ịkwanyere ndị nwere echiche dịgasị iche ùgwù. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ naghị enyere ụlọ ọrụ aka isoro ndị ahịa ha nwee nkwukọrịta nke ọma - ma ọ bụ otu ọzọ.
Barry Feldman kwuru
Jul 19, 2015 na 7:59 PM
Roomlọ ikpe a agbasaghị iwu!
M na-ekwu mgbe ị gbanwere ụfọdụ ndị, ị na-agbanye ụfọdụ ndị. Kwuo ihe ị ga-eme Doug (amaara m na ị ga-eme ya). O doro anya na enwere ihu abụọ nke ndị ihu abụọ na-ekwu maka izi ezi ma gosipụta eziokwu ha abụghị naanị n'okporo ụzọ, yabụ enwere m obi ụtọ na ị kwusara ya.
Echere m na n’agbanyeghi ebe ị na-abanye, na ị banye n’ọchịchị ị ga-ewe ndị mmadụ iwe. Biko mee. Okwesiri ka ndi mmadu gha enyere ndi mmadu aka ime mkparita uka.
Jul 19, 2015 na 9:15 PM
Echere m otú ahụ, Barry! Ma, achọpụtala m na ọtụtụ ndị anaghị ekwusara ndị ọzọ ihe ha kweere. Ọ dị njọ nke ukwuu, n’echiche m.
Jul 20, 2015 na 6: 52 AM
O di nwute, ego di ka ihe ngebichi maka enweghi nghọta. Edere ya nke ọma, kwuo ya nke ọma wee dịrị ndụ.
Jul 20, 2015 na 12:46 PM
Jul 20, 2015 na 8: 56 AM
Nke a bụ oke mpempe, Doug. Na-ekwu na mgbasa ozi mgbasa ozi Emperor enweghị uwe bụ ngosipụta dị oke mma nke nghọta doro anya.
Mana echere m na ịpụta "ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi" maka nkatọ dị oke. Egwu ịbụ onye mgbasa ozi mgbasa ozi na-egbochi ịkekọrịta mmadụ niile mana ndị kacha nupụ isi n'etiti anyị.
O doro anya na mgbasa ozi mmekọrịta na-akwalite nkwekọ na izi ezi nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ naanị ọdịdị nke onye na-ajụ ase.
Jul 20, 2015 na 12:42 PM
Eziokwu na nsogbu ahụ sara mbara… mana ọ bụ ndị na-ekwusa ma na-akwụ ụgwọ na m na-atụ aka m.
Jul 20, 2015 na 8: 57 AM
Etu m siri kwue nke a bụ na m na-aga ahịa na LinkedIn na nkeonwe na Facebook. Twitter na-enweta ngwakọta ọkụ nke ha abụọ. N'ihi ya, abụ m ọtụtụ nhọrọ na ndị enyi m ma ọ bụ nabata arịrịọ ndị enyi na Facebook. Achọrọ m ka ha mata m nke ọma na, yabụ, ọ naghị eju m anya na echiche m na / ma ọ bụ na ha maara na enwere m mkparịta ụka ma ọ bụ arụmụka nkwanye ùgwù.
Site na usoro a, achọpụtara m na m nwere ike ịkekọrịta echiche m na itinye aka na mkparịta ụka ma na-echekwa mmekọrịta m.
Jul 20, 2015 na 12:47 PM
N'ihi ya, ị ghaghị inyocha onwe gị n'ihi na ụfọdụ ndị agaghị ekwenye na ọbụna ikpe gị ikpe na nkwenkwe gị… n'agbanyeghị etu ị kwanyere ugwu gị. Ama m. 🙂
Jul 20, 2015 na 4:49 PM
Amaghị m na m ga-eche maka nke a dị ka mmachi dị oke nkewa. :) '
Jul 20, 2015 na 9: 59 AM
Nke a bụ n'ezie ihe na-akpali echiche. Kedu otu m ga-esi dị adị ma ọ bụrụ na azụmaahịa metụtara ya? Ọnọdụ m ọ ga-ewute onye mụ na ya na-azụkọ ahịa ma ọ bụ ya na m ga na-azụ ahịa? Adịghị m mma na ntanetị dị na ntanetị, yabụ m na-ezigaghị ozi oge niile. Mama m na-agwakarị m ka m ghara itinye aka n’okwu gbasara ọchịchị na okpukpe. Maka ọtụtụ akụkụ, ndị mmadụ nwere eziokwu, echiche na asịrị (FOG). Arụmụka ndị ahụ dị n’apịtị bụ ebe ịgba asịrị na echiche na-achị. Enwere m ọchịchọ ịgbanwe mmetụta m na isiokwu dị ka mgbagha. Ọtụtụ ndị na-eme otu ihe. Ọ bụ naanị mgbe m nwere ike inyocha mmetụta m (na ndị ọzọ na-eme otu ihe ahụ) na isiokwu m nwere ike ịhapụ echiche na asịrị wee nwee mkparịta ụka na-arụpụta. Daalụ Doug maka post na-akpali akpali!
Jul 20, 2015 na 12:48 PM
Daalụ! Ekwenyere m… Achọrọ m naanị na anyị nwere obi ike iji kwanyere esemokwu ùgwù ma kwụsị ịgba arụmụka. O yiri ka enwere echiche na mba a na ị na-anọnyere m ma ọ bụ megide m… kama ịdị iche na m.
Jul 20, 2015 na 10: 20 AM
Di na nwunye, ọ bụrụ na m nwere ike.
1. mụ mmadụ bụ agbụrụ ma na-achọ usoro na arụmọrụ. Ha anaghị enwe mmasị na ndị na-emebi iwu mgbe niile ma na-achụpụ ha n'ọzara. Nke a bụkwa eziokwu na soshal midia. O nweghị onye ga-ewepụ ọtụtụ puku omume rụrụ arụ kemgbe afọ ole na ole. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze agbanwebeghị ụzọ ụmụ mmadụ * si emekọrịta n'ezie. Kama nke ahụ, ọ chọtala ụzọ ụmụ mmadụ ga-esi gboo mkpa a dị omimi nke dị n'ịntanetị. Ọ bụ ya mere o ji buru dị ka rọketi. Ọ bụghị ihe ọhụrụ. Ọ na-enyere ihe dị ezigbo nká aka.
2. Echere m n'oge na-adịbeghị anya na, karịa ịkpọ nke a 'afọ' dijitalụ ', ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme n'ọdịnihu ga-ezo aka na afọ site na 1995 ruo 2030 dị ka' Oge nke Narcissism '. Dịka m kwuru n'elu, ntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta abụghị ndị ọkwọ ụgbọala nke mgbanwe, Ha bụ naanị mgbasa ozi na-enyere ma na-egosipụta ihe ndị mmadụ na agbụrụ na-eche ma na-eche. Na oge dijitalụ a, anyị ejirila usoro mgbasa ozi dịka ụzọ maka mmadụ niile iji nweta ilu '15 nkeji nke ama 'kama ị na-eme mgbanwe mgbanwe mmekọrịta miri emi ma na-adịgide adịgide. Dị ka ọ dị na redio na telivishọn tupu oge ahụ, soshal midia agbadatala ngwa ngwa ka ọ bụrụ onye ama ama maka ndị ama ama ugbu a iji bulie ihe oyiyi ha elu (wdg., Donald Trump) na onye ọ bụla nwere ọnụ na keyboard iji bụrụ 'onye ndu echiche', ma ọ bụ 'mgbanwe onye ọrụ ', ma ọ bụ' onye na-eto eto '. Anyi na-egwu egwu mgbe anyi choputara okwu ohuru iji gosiputa na anyi nwere echiche ohuru (ozo… ibu hacking), ma kwesiri ito anyi dika ndi ndu. Anyị nwekwara okwu ndị dị ọnụ ala dịka, 'ọgụgụ isi', 'onye isi echiche', 'guru' na ndị ọzọ. O yiri ka ndị ọzọ ọ bụla nọ na LinkedIn bụ otu ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị a dị n'elu, n'agbanyeghị na ọkwa ya na ama ama bụ 'ịhazigharị' weebụsaịtị azụmaahịa ezinụlọ ya ma bugharịa ha n'akụkụ ọkwa SEO. Ilitydị umeala n'obi na ụkpụrụ omume bụ n'ụzọ dị ukwuu n'oge a, ma ama na ịbụ mmadụ bụ ego nke ụbọchị ahụ. Echere m na a ga-enwe ọhụụ n'oge ụfọdụ mgbe 'nnukwu mgbawa' ahụ gafere, mana rue mgbe ahụ, ọ bụ ihe niile gbasara m na otu m ga - esi jiri gị mezuo ebumnuche m.
Jul 20, 2015 na 12:51 PM
Echiche na-akpali. Mana m ga-agbakwunye na ọ bụ ndị na-ahapụ nụ na a na-akpọ 'narcissists' na-eme ka ụmụ mmadụ nwee ọganihu. Ọ bụrụ na ị bụ nanị otu n'ime ìgwè ehi, ị nwere ike ịbụ akụkụ nke nsogbu ahụ!
Jul 20, 2015 na 11: 13 AM
Ọ dị ka ịnwere ndị ọkachamara SM na-arụ ụka gị na post a. Thatdị nke ahụ ọ́ naghị egosi na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu?
Jul 20, 2015 na 12:49 PM
Ee! Ee, ọ dị.
M na Barry Feldman nọ. “… Mgbe ị na-eme ka ụfọdụ ndị pụọ, ị na-eme ka ụfọdụ kwụsị.” Anọgidere m na-eche na echiche m bụ nke m na ọ nweghị onye ọzọ na ntanetị m. Ọ na-atọ m ụtọ ma a kpọọ m ndị na-enweghị echiche m. Ma ekwenyere m na gị na ụfọdụ ndị na-atụ ụjọ itinye aka na arụmụka ma ọ ga-akara ya mma. Ha nwedịrị ike ikwenye m mana ọ gaghị akụ bọtịnụ “dị ka” ụjọ maka ụjọ ịghara ịchọpụta. Abụghị m otu n’ime ha. Edgy people na ụdị.
Jul 20, 2015 na 6:32 PM
Echere m na ihe dị iche bụ na ụfọdụ ndị na-ekwupụta nkwenkwe ha n’enweghị ikpe ndị ọzọ ikpe ma ọ bụrụ na ha ekwenyeghị. M kwụsịrị iso onye ọzọ ụbọchị m n'ezie na-akwanyere ùgwù n'ihi na ọ tweeted "ndị nzuzu ndị kwere na…" na m na-abụ otu n'ime ndị "nzuzu." Echere m na ụwa echefuola na anyị nwere ike ghara ikwenye ma na-asọpụrụ na ndị ọzọ nwere ike ịbatala na nkwubi okwu dị iche na otu eziokwu ahụ.
Jul 20, 2015 na 7:12 PM
Uzo di otua di uku. Ọ dị m ka ya bụrụ na anyị ga-eweghasị nkwanye ugwu kwanyere n’obodo a.
Jul 29, 2015 na 1:37 PM
Otu ihe m na-agbasi mgba ike bụ na a na-akwụ ndị na-ede akwụkwọ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụgwọ ka ha were ọnọdụ, dị ka onye ọchụnta ego ị na-etinye ihe ọghọm n'atụmanya na ndị ahịa. N’ezie agabeghị m ikwupụta nghọta ka m wee chee na the
Jul 30, 2015 na 2:25 PM
Bụ eziokwu. Ekwenyesiri m ike na m na-efunahụ m ụfọdụ ndị ahịa na atụmanya. Agbanyeghị, ọ ga - akara m mma ịrụ ọrụ na ndị na - akwanyere ùgwù na m nwere ike inwe echiche dị iche na nke na - emeghị. Ọ bụ nhọrọ siri ike, n'ezie.